Ny mpanadio banga mora indrindra 2022: torolàlana fividianana sy tolotra tsy mampino
mpanadio banga mora vidy
Mora vidy kokoa
Omeo anarana aho
Robot manadio vacuum
kifafa mpanadio banga
tsy misy kitapo
2 sy 1
Tsy misy cable
misy sivana rano
Ho an'ny biby fiompy
avy amin’ny lavenona
mini vacuum mpanadio
Tianao mividy mpanadio banga mora vidy? Nitombo haingana ny tsenan'ny mpanadio banga nandritra ny taona maro. Azontsika jerena ny nitomboan'ny fifantenana ireo mpanadio banga eny an-tsena. Mihamaro hatrany ireo marika sy karazany azo alaina. Samy manana ny toetrany manokana izy ireo ary amin'ny toe-javatra maro dia manana fampiasana manokana kokoa izy ireo, saingy midadasika kokoa ny fifantenana. Noho izany dia manana safidy bebe kokoa ny mpampiasa.
Rehefa mandeha mividy mpanadio banga vaovao isika, dia mety ho sarotra ny fisafidianana. Na dia misy lafiny roa tian'ny mpanjifa tsirairay aza. Mila mpanadio banga manara-penitra tsara izahay fa tsy lafo loatra. Izany matetika no fanirian'ny ankamaroan'ny olona. Noho izany antony izany dia avelanay eto ambany ianao miaraka amin'ny fisafidianana mpanadio banga mora vidy.
Modely tsara daholo izy ireo saingy azo idirana ny vidiny. Mba tsy hiheverana ezaka be loatra ny fanavaozana ny vacuum cleaner anao. Lazainay aminao bebe kokoa momba ireo modely rehetra ireo eto ambany.
Mpanadio banga mora indrindra
Nanao fifantenana modely maromaro izahay. Ireo rehetra ireo dia modely misongadina amin'ny fananana vidiny mora kokoa ho an'ny mpampiasa, saingy tsy misy dikany ny manafoana ny kalitao. Ity ambany ity dia avelanay ho anao ny latabatra misy ny antsipiriany momba ny tsirairay amin'ireo modely ireo. Aorian'ny latabatra dia miresaka momba ny tsirairay amin'izy ireo amin'ny antsipiriany bebe kokoa.
Noho ireo angon-drakitra ireo dia afaka mahazo hevitra mazava kokoa ianao momba ny modely mety ho ilay tena mahaliana anao hividy.
Miaraka amin'ny fihenam-bidy
Cecotec Robot Vacuum Cleaner sy ...
Kifafa mpanadio tsy misy...
Taurus Tanindrazana tsy misy farany -...
Cecotec Vacuum mpanadio tsy misy...
Ny mpanadio banga mora indrindra
1 Mpanadio banga mora indrindra
2 Ny mpanadio banga mora indrindra
2.7 Vacuum tsy misy kitapo AmazonBasics
2.8 VicTsing Vacuum Cleaner Tanana tsy misy tady
3 karazana aspirator
3.6 avy amin’ny lavenona
3.7 2 sy 1
3.8 tsy misy kitapo
3.9 Ny rano
3.10 AN'NY TAOZAVA-BAVENTY
4 Marika mpanadio banga tsara indrindra
5 Ahoana ny fisafidianana mpanadio banga
5.3 Karazana sivana
5.5 Tsy misy maharesy lahatra anao?
Raha vao naseho ny fepetra manan-danja indrindra amin'ny tsirairay amin'ireo mpanadio banga ireo, dia afaka manohy miresaka momba ny tsirairay amin'ireo modely ireo amin'ny lalindalina kokoa isika. Amin'izany fomba izany dia afaka mianatra bebe kokoa momba ireo modely ireo sy ny fiasan'izy ireo ianao. Noho izany, raha misy iray mifanaraka amin'ny filanao, dia ho fantatrao izany avy hatrany.
Manokatra ny lisitra miaraka amin'ity mpanadio banga robot avy amin'ny Cecotec ity izahay, marika fanta-daza amin'ny sehatra amin'ny famokarana mpanadio banga robot isan-karazany. Modely izay, toy ny robot rehetra, dia safidy tena tsara. Satria ny hany tsy maintsy ataontsika dia ny fandaharana izany ary manomboka manadio ny gorodona ny tranontsika. Manadio in-efatra izy io ary manana fomba fanadiovana in-6. Tsy vitan'ny hoe mikosoka fotsiny izy io, fa mamono sy mamafa koa. Noho izany, manaova fanadiovana tanteraka ny trano. Ankoatra izany, dia miasa tsara amin'ny karazana gorodona rehetra.
Rehefa manadio ny trano, noho ny teknolojia, dia tsy hifandona amin'ny fanaka, olona, ​​zorony na hianjera amin'ny tohatra. Noho izany, afaka mipetraka isika ary mamela ny robot hanao ny asany. Izy io dia manana bateria manome azy 160 minitra. Rehefa ho lany ny bateria dia miverina mivantana any amin'ny fotony ilay robot mba hamenoana tanteraka. Ka tsy mila manahy momba izany isika. Izy io dia manana tanky avo lenta, izay ahafahantsika manadio ny trano manontolo tsy mila fanalana azy.
Amin'ny maha sivana azy dia manana sivana HEPA izy io, midika izany fa afaka manadio azy mora foana isika. Apetraho ao ambanin'ny paompy fotsiny dia avela ho maina. Araka izany, efa madio ary vonona hampiasaina indray. Izany dia fomba tena mahazo aina izay ahafahantsika mitahiry vola amin'ny sivana. Misongadina ihany koa ity robot ity satria tsy mitabataba. Ny robot dia tonga miaraka amin'ny kojakoja tafiditra, ao anatin'izany ny borosy maromaro, ny toby fiampangana, ny fanaraha-maso lavitra ary ny adapter.
Na dia tsy izy irery aza no ao anatin'ity lisitra ity, ny iray amin'ireo endri-javatra miavaka indrindra amin'ity mpanadio gorodona Ecovacs ity dia ny mifanaraka amin'ny Alexa sy ny rindranasa finday, mba hahafantarantsika ny misy azy amin'ny fotoana rehetra. Ankoatr'izay dia manana karazana faharanitan-tsaina hafa koa izy, amin'ity tranga ity ny Smart Navi 3.0 Navigation izay miasa noho ny laser izay ahafahanao mahafantatra izay alehanao ary mamorona sarintanin'ny tranontsika.
Araka ny efa voalazanay, miaraka amin'ny app ECOVACS azo amboarina avy amin'ny finday ny sakana virtoaly manao laharam-pahamehana na manakana ny faritra mba hanadiovan'ny robot ny toerana tiantsika. Amin'ny lafiny iray, azontsika ampiasaina ny iray amin'ireo fomba fanadiovana efatra mba hahazoana antoka fa manadio ny toerana, ny fomba ary ny fotoana tiantsika.
Eo amin'ny toerana faharoa dia mahita ity maodely ity avy amin'ny marika iray ihany, na dia amin'ity indray mitoraka ity dia mpanadio kifafa 2-in-1. Midika izany fa misy mpanadio banga tànana izay azontsika alaina ary manadio faritra somary voafaritra kokoa toy ny sofa na ny seza fiara. Noho izany dia afaka manao fanadiovana lalina kokoa ny trano. Izy io dia miavaka amin'ny fampiasana ny teknolojia cyclonic, teknolojia manome hery be dia be. Ankoatra izany, midika izany fa tsy very hery rehefa mandeha ny fotoana. Zavatra manome fiadanan-tsaina be dia be ho an'ny mpampiasa.
Modely maivana izy io ary mora ampiasaina ao an-trano. Kely ny lanja, izay tena azo fehezina. Indrindra raha manana trano misy tohatra isika, ka tsy mahasosotra ny tsy maintsy mitondra azy avy amin’ny toerana iray. Ity modely ity dia miasa amin'ny tariby, ary ny tariby misy azy dia mirefy 6 metatra. Noho izany dia afaka mivezivezy manodidina ny trano amim-pahatoniana sy eo anelanelan'ny efitrano isika fa tsy mila manindrona sy manala ny plug. Ankoatr'izay, ity mpanadio vacuum kifafa ity dia miasa tsara amin'ny karazan-tany rehetra, anisan'izany ny gorodona hazo.
Misy tahiry 1 litatra izy io. Izany dia manome antsika fahafahana ampy hanadiovana ny trano manontolo imbetsaka tsy misy olana. Ankoatra izany, ny fitrandrahana ny tanky dia tena tsotra ary izany no fomba fanadiovana azy. Izany koa dia mitranga amin'ny sivana, izay tsotra ny fikojakojana. Satria sivana HEPA izy io. Noho izany, mila manadio azy ireo fotsiny isika. Raha ny momba ny tabataba dia tsy dia malina indrindra izy io, fa miteraka tabataba mitovy amin'ny mpanadio banga mahazatra. Tena mora ny mitahiry azy satria zara raha maka toerana. Ity mpanadio banga ity dia miaraka amin'ny nozzle fanampiny roa misy.
Eo amin'ny laharana fahatelo no ahitantsika ity mpanadio banga Rowenta mahazatra kokoa ity, farafaharatsiny amin'ny lafiny famolavolana. Mampiasa ny teknôlôjia cyclonic izy io, izay manome azy hery lehibe sy hery mitsoka. Ankoatra izany, tsy very io hery io rehefa mandeha ny fotoana. Noho izany, afaka mankafy ny fampiasana azy mandritra ny fotoana maharitra isika miaraka amin'ny fampiononana ambony indrindra. Antoky lehibe ho an'ny olona maro. Izy io dia miasa tsara amin'ny karazana surface rehetra, fa indrindra amin'ny gorodona mafy (vato, taila...). Ka raha manana an'io karazana gorodona io ianao dia mpanadio banga mety tsara ho azy ireo.
Izy io dia miasa miaraka amin'ny tank misy tanjaka 1,5 litatra izay azonay mora foana. Fanampin'izany, dia vola ampy ahafahana manadio ny trano manontolo tsy misy olana. Misy sivana HEPA koa izy io, midika izany fa afaka manasa azy isika. Apetraho eo ambanin'ny paompy fotsiny ny sivana mba hanesorana ny loto. Rehefa vita izany dia avelantsika ho maina ary averina ao anaty “vacuum cleaner”. Izany rehetra izany dia tsy manary ny herin'ny suction. Ny mpanadio vakoka Rowenta dia misy tady, misy tady 6,2 metatra. Izany dia mamela antsika hivezivezy manodidina ny trano amin'ny fomba mora.
Mahatratra 6,8 Kg ny lanjany, fa aza adino ny tarehimarika, fa modely mora entina sy mivezivezy ao an-trano. Noho ny famolavolana azy miaraka amin'ny kodia, izy io dia mpanadio banga be finday. Ankoatra izany, raha ny fitahirizana dia tsy maka toerana be loatra, noho izany dia mora ny mitady toerana hitehirizana azy. Miteraka tabataba mitovy amin'ny mpanadio banga mahazatra izy io, ka tsy misy mahagaga amin'izany. Tsy dia tabataba loatra izany.
Any amin'ny toerana fahefatra no ahitantsika ity mpanadio banga ity izay ny tena fampiasa indrindra dia toy ny mpanadio banga indostrialy, na dia afaka mampiasa azy amin'ny toe-javatra maro samihafa aza isika. Saingy, miavaka indrindra amin'ny maha-modely mahery vaika izay manome hery suction lehibe. Amin'izany fomba izany dia ho afaka hanala ny loto miangona amin'ny fomba mora sy mahomby ianao. Ankoatr'izay dia miasa amin'ny loto mando ihany koa izy io, ka mamela antsika hampiasa betsaka kokoa noho ny mpanadio banga mahazatra amin'io lafiny io. Noho izany dia tena isan-karazany.
Manana tanky lehibe izy io, ka izany no mahatonga azy io ho an'ny fampiasana indostrialy izay misy loto miangona bebe kokoa. Izany dia manome antsika safidy afaka manadio toerana lehibe kokoa tsy mila manafoana isaky ny minitra vitsivitsy. Noho izany, ny fanadiovana dia mahomby kokoa amin'ny lafiny rehetra. Ankoatra ny fanadiovana dia misy fiasa mitsoka izay miasa tsara. Noho izany dia afaka manao fanadiovana lalina kokoa ianao.
Izy io dia modely manana lanjany 7,66 kg. Saingy, na dia eo aza io isa io, dia modely azonay atao mora foana. Fanampin'izany, noho ny famolavolana kodiarany efatra, dia tena finday ary tena miorina tsara. Noho izany dia tsy hianjera na hikorontana na oviana na oviana izy io mandritra ny fampiasana azy. Ka ny fanadiovana ihany no tena imasoanay. Misy tariby mirefy 4 metatra ny halavany. Tsy ny lava indrindra izy io, fa manome fahafaham-po antsika.
Ity Braava 390t ity dia natao hanadiovana efitrano lehibe maro. Manana pass de scrubbing triple izy io ary ny iadapt 2.0 miaraka amin'ny cubes fitetezana izay manampy ity robot kely ity hanara-maso ny toerana misy azy. Ho safidy dia afaka misafidy pass tokana isika raha tsy te hanala loto, vovoka, volon'ny biby fiompintsika ary allergens na mampiasa ny triple pass azy mba hikosoka hatramin'ny 33m².
Ho an'ny endri-javatra hafa dia misy lamba mikrofibera 4, ka ny roa ho an'ny fikikisana ary ny roa ho an'ny mopping, izay midika fa afaka maina mop.
Vacuum tsy misy kitapo AmazonBasics
Ity modely manaraka ity dia mpanadio banga mahazatra kokoa izay misongadina amin'ny fanolorana asa mahomby sy tsy misy olana. Izy io dia modely mahazatra kokoa hanaovana fanadiovana trano. Izy io dia mamela antsika hanao vacuum amin'ny karazana gorodona rehetra ary manana hery ampy. Tsy izy no mahery indrindra amin'ny lisitra, saingy tsy mamela loto tsy misy fanalana azy na oviana na oviana. Noho izany dia manatanteraka tanteraka ny iraka ataony amin'ny fotoana rehetra.
Misy tanky 1,5 litatra izy io, izay ahafahantsika manadio im-betsaka ny trano mandra-pahafeno azy. Ny fitrandrahana sy ny fanadiovana an'io tahiry io dia tena tsotra. Ka tsy mila fikojakojana be loatra. Toy izany koa no mitranga amin'ny sivana HEPA izay misy azy. Rehefa tsikaritra fa be loatra ny loto miangona, dia tsara kokoa ny mandona azy, avela ho maina ary ampiasaina indray. Amin'izany fomba izany dia miverina manana ny herin'aratra ambony indrindra toy ny andro voalohany. Fomba tena tsotra.
Izy io dia miasa amin'ny tariby, amin'ity tranga ity dia manana tariby 5 metatra. Izany dia mamela antsika hivezivezy tsara ao an-trano ary manome antsika fahalalahana betsaka. Raha ny lanja, ity modely ity dia milanja 4,5 kg. Noho izany dia tsy anisan'ny mpanadio banga mavesatra indrindra izy io, ka mora ny mivezivezy sy mitondra azy miaraka amintsika raha tsy maintsy miakatra tohatra. Ankoatr'izay, noho ny famolavolana azy miaraka amin'ny kodiarana dia tena finday izy io, noho izany, tsy ilaina ny manahy sy mitondra azy amin'ny fotoana rehetra. Miteraka tabataba mitovy amin'ny mpanadio banga mahazatra izy io. Ankoatra izany, ity modely ity dia miaraka amin'ny kojakoja tafiditra.
VicTsing Vacuum Cleaner Tanana tsy misy tady
Any amin'ny toerana farany farany dia mahita ity mpanadio banga tànana ity izahay. Mpanadio banga kely kokoa ary natao hampiasaintsika amin'ny faritra tsy azon'ny mpanadio banga mahazatra. Noho izany, safidy tsara ny fampiasana amin'ny sofa na amin'ny seza fiara. Tranonkala izay somary sarotra kokoa ny fanadiovana ary mitaky fahamatorana bebe kokoa. Noho io maodely io dia ho mora kokoa ny manatratra ireo faritra ireo mba hitazonana azy ireo ho madio foana.
Ho an'ny modely kely habe dia manana hery be dia be. Noho izany dia hanampy antsika hamita na dia amin'ny loto sarotra indrindra. Noho izany dia hamirapiratra foana ny sofa. Ankoatra izany, dia kely dia kely ny lanjany, ka mahatonga ny fampiasana azy ho tena mahazo aina sy tsotra. Tena azo fehezina izany, izay manampy betsaka ihany koa, satria tsy mora foana ny asa fanadiovana amin'ireo faritra ireo. Ity modely ity dia miasa tsy misy tariby. Manana bateria manana fahaleovan-tena 30 minitra izy io izay azontsika apetraka.
Misy petra-bola azonay foanana amin'ny fotoana rehetra amin'ny fomba mora. Ankoatra izany, ny fanadiovana sy ny fikojakojana azy dia tena tsotra. Toy izany koa ny sivana izay tafiditra. Sivana azo sasana izy io. Ka rehefa hitanay fa very hery ilay izy, dia hosasanay eo ambany paompy ilay sivana, avela ho maina ary averina. Noho izany, dia mandeha tsara indray. Tafiditra ao anatin'izany ny kojakoja maromaro, toy ny nozzles ho an'ny sehatra sy fiasa samihafa.
Any amin'ny toerana farany no ahitantsika ity mpanadio vakoka kifafa Rowenta ity. Modely mahagaga izy io satria tena mahery vaika, ka ho afaka hanafoana ny vovoka sy ny loto miangona ao an-tranontsika. Izy io dia miasa tsara amin'ny karazana surface rehetra noho ny borosy, natao hanaovana izany. Noho izany, na dia manana gorodona hazo aza ianao dia afaka mampiasa izany tsy mila manahy. Izy io dia miantoka ny fanadiovana mahomby sy maharitra.
Ity modely ity dia miasa tsy misy tariby. Izy io dia manana bateria maharitra 45 minitra. Fotoana izay tokony ho ampy hanadiovana ny trano manontolo. Rehefa lany ny bateria dia apetrakay eo am-baravarana. Mila adiny valo eo ho eo vao fenoina, izay mety ho lava loatra. Noho izany dia tsara kokoa ny mamaly azy foana amin'ny alina. Noho izany dia efa vonona amin'ny maraina ianao raha mila manadio ny trano. Ity modely ity dia manana tanky azo esorina amin'ny 0,5 litatra.
Misy sivana HEPA afaka diovina koa izy io. Noho izany dia tsy maintsy mandona azy ao ambanin'ny paompy ianao, avelao ho maina ary avereno indray. Noho izany dia afaka mankafy ny vacuum mpanadio indray isika toy ny tamin'ny andro voalohany sy ny banga amin'ny hery lehibe sy mazava tsara. Raha ny momba ny tabataba, dia miteraka tabataba kokoa noho ny modely hafa ao amin'ny lisitra, na dia tsy tabataba manelingelina na aretin'andoha aza.
Araka ny efa nambarantsika teo aloha dia misy karazany maro ny mpanadio vacuum misy ankehitriny. Ny tsirairay dia manana ny mampiavaka azy izay mahatonga azy ireo ho tsara kokoa amin'ny toe-javatra sasany. Noho izany dia tsara ny manazava ny karazana mpanadio banga ilaina na tadiavintsika. Satria hahatonga ny fikarohana ataontsika ho marina kokoa izany. Lazainay aminao bebe kokoa momba ireo karazana mpanadio banga eto ambany.
Fanadiovana vovoka vovoka
mpanadio banga ranoka
mpanadio banga biby fiompy
Fanadiovana vacuum 2 amin'ny 1
mpanadio banga indostrialy
Vacuum mpanadio fiara
Vacuum mpanadio tsy misy tady
mpanadio sivana rano
mpanadio banga cyclone
sled vacuum mpanadio
mpanadio banga tanana
mpanadio banga tsy misy kitapo
Robot vacuum mpanadio sy mop
Jereo ny sled vacuum cleaners
Ireo no mpanadio banga mahazatra izay fantatsika rehetra. Amin'io lafiny io dia mitazona ny endrika sy ny endrika mahazatra izy ireo. Na dia efa nandroso be aza ny teknolojia ary matetika izy ireo dia maoderina sy mahery kokoa. Izy ireo dia modely izay miasa tsara amin'ny karazana surface rehetra ary tsy vitan'ny hoe manadio vovoka trano, fa koa ny loto rehetra.
Jereo ny kifafa mpanadio banga
Ireo mpanadio banga ireo dia miavaka amin'ny fakana tahaka ny endriky ny kifafa. Noho izany dia mitsangana sy lava izy ireo. Matetika izy ireo dia mandeha amin'ny herin'ny bateria ary somary matanjaka kokoa noho ny mpanadio banga mahazatra. Na dia miavaka aza izy ireo amin'ny maha-maivana azy, azo fehezina ary amin'ny fikarakarana tsara azy.
Jereo ny robot mpanadio banga
Kilasy izay mahazo vahana be tato anatin’ny taona vitsivitsy. Safidy tena mahazo aina izy ireo satria ny hany tsy maintsy ataontsika dia ny fandaharana ary ny robot no hikarakara ny fanadiovana ny trano ho antsika. Miara-miasa amin'ny bateria izy ireo ary misongadina hatrany amin'ny endriny boribory amin'ny endriky ny takelaka. Na izany aza, izy ireo koa dia hita fa lafo kokoa noho ny mpanadio banga mahazatra.
Ireo dia mpanadio banga kely habe izay azonao tazonina tsara amin'ny tananao. Izy ireo dia natao hanatratra ny zorony izay tsy mahatratra ny mpanadio banga mahazatra, toy ny seza fiara na sofa. Mora karakaraina izy ireo, kely lanja ary mora vidy matetika ny vidiny. Ny vacuums tapa-kazo sasany dia tonga miaraka amin'ny vacuum an-tanana.
Jereo ny mpanadio banga tànana
Jereo ny mpanadio ny rivodoza
Ny mpanadio banga cyclonic dia miavaka amin'ny famoronana tafio-drivotra izay mampitombo ny herin'ny setroka, manampy amin'ny fanavahana ny loto mora kokoa ary koa tsy very fahombiazana rehefa mandeha ny fotoana.
Jereo ny mpanadio lavenona
Ireo karazana mpanadio banga ireo dia natao hisakana lavenona avy amin'ny fatana, barbecue na karazana hetsika hafa mahatonga ny fivorian'ny lavenona. Manana fampiasana manokana kokoa izy ireo, na dia mifoka vovoka sy loto aza izy ireo. Fa ny tena asa dia ny manala ny lavenona na sawdust.
Jereo ny mpanadio banga 2-in-1
Ireo dia mpanadio banga izay ahitantsika ny mpanadio banga lehibe sy ny tànana. Izy ireo amin'ny ankapobeny dia maodely kifafa izay miaraka amin'ny mpanadio banga tànana mitambatra. Noho izany dia azonao atao ny manadio ny trano manontolo amin'ny marina kokoa. Satria manana mpanadio banga ho an'ny gorodona ianao ary iray hafa ho an'ny faritra toy ny sofa na zorony tsy dia azo idirana.
Jereo ny mpanadio banga tsy misy kitapo
Izy io dia karazana mpanadio banga izay hitantsika amin'ny ankamaroan'ny marika. Raha tokony ho ny kitapo mahazatra fitehirizana loto, dia manana fitoeran-javatra azo esorina izy ireo. Amin'izany fomba izany, rehefa feno izy, dia esorinay ny tanky ary esory izany. Noho izany, tsy mandany vola amin'ny kitapo izahay. Ankoatra izany, ny fikojakojana ireo petra-bola ireo dia tena tsotra.
Jereo ny mpanadio rano
Miatrika karazana mpanadio banga manokana isika satria mety tsara ho an'ireo olona manana olana amin'ny allergie na tsy fahazakana amin'ny vovoka na moka. Afaka manadio trano izy io, nefa manampy amin'ny fanadiovana ny rivotra koa noho ny sivana rano. Noho izany dia manana fanadiovana lalina kokoa ny trano izahay ary ataonay antoka fa madio araka izay azo atao ny rivotra.
Jereo ny mpanadio banga indostrialy
Ireo karazana mpanadio banga ireo dia natao hanadiovana kokoa amin'ny faritra ara-barotra, hotely na trano fisakafoanana na amin'ny indostria. Satria izy ireo dia miavaka amin'ny fananana hery lehibe afaka mitroka ny zava-drehetra. Noho io hery io dia azo atao ny fanadiovana mahomby kokoa sy mahomby. Noho izany, ny fampiasana an-trano dia tsy fomba tsara indrindra hanararaotra izany.
Marika mpanadio banga tsara indrindra
Rehefa mitady mpanadio banga vaovao isika dia mijery be dia be ny marika. Indraindray isika dia mety te hividy modely mitovy amin'ny marika efa ananantsika na miloka amin'ny marika fantatra. Tsy isalasalana fa ny marika dia manana fiantraikany lehibe amin'ny fotoana maro. Satria amin'ny ankapobeny dia misafidy marika fantatray na atokisanay izahay. Ny fifantenana ny marika dia tena midadasika amin'izao fotoana izao, na dia misy aza ny sasany manokana amin'ny karazana mpanadio banga manokana.
Roomba mpanadio banga
Taurus mpanadio banga
Polti mpanadio banga
Dreame mpanadio banga
Ikohs mpanadio banga
Vacuum cleaner Makita
LIDL mpanadio banga
mpanadio banga electrolux
Dyson mpanadio banga
Bosch mpanadio banga
Rowenta mpanadio banga
Karcher mpanadio banga
Conga mpanadio banga
Ecovacs mpanadio banga
Izy io no marika mpanamboatra robots vacuum par excellence. Iza no tsy mahalala ny Roomba mpanadio banga? Efa 25 taona teo ho eo izy ireo no tao an-tsena, ka manana traikefa tsara. Ho fanampin'izany, ny robots dia matetika no mandroso indrindra ary ireo izay manolotra fampisehoana tsara indrindra. Ka raha mitady mpanadio banga robot ianao dia tsy isalasalana fa io no marika tokony hofidinao.
Iray amin'ireo marika malaza indrindra eny an-tsena. Orinasa manana traikefa tsara nandritra ny taona maro, noho izany dia miantoka ny kalitao sy ny fampandehanana araka ny tokony ho izy ny maodely. Manamboatra karazana mpanadio banga maro izy ireo, manomboka amin'ny sled nentim-paharazana, ny kifafa, ny tanana ary koa ny 2 in 1. Jereo eto ny modely tsara indrindra amin'ny Rowenta mpanadio banga.
Marika iray hafa fantatry ny ankamaroan'ny mpampiasa ary mitovy amin'ny kalitao ihany koa. Manana traikefa be dia be amin'ny tsena izy ireo ary manana ny fanohanan'ny mpanjifa, satria marika iantefan'ny maro izy ireo satria fantany fa hahita vokatra tsara izy ireo. Manamboatra karazana mpanadio banga maro izy ireo (kifafa, sledge, tànana, indostrialy...), eto no ahitanao ny Bosch mpanadio banga tian'ny mpampiasa.
Mety tsy fantatry ny maro io anarana io, saingy orinasa manana traikefa amin'ny sehatra izy ireo. Ankoatra izany, ny karcher vacuum mpanadio Izy ireo dia miavaka amin'ny fanaovana mpanadio banga mahery vaika izay manolotra fampisehoana tsara foana. Ka raha mitady mpanadio banga ianao izay ny hery no antony lehibe indrindra, dia iray amin'ireo marika tokony hodinihina. Manamboatra karazany maro koa izy ireo (indostrialy, lavenona, fiara, sledge...).
Izy io dia marika izay fantatry ny ampahany betsaka amin'ny mpanjifa. Amin'ny ankapobeny dia orinasa iray izay misongadina ny vokatra amin'ny kalitaony sy ny fahombiazany rehefa mandeha ny fotoana. Noho izany mividy mpanadio vacuum dyson antoka ihany koa ary safidy azo antoka hitodika rehefa mitady mpanadio banga. Izy ireo dia manamboatra karazana mpanadio banga isan-karazany (sledge, industrial, tanana, kifafa...).
NA ecovacs mpanadio banga vao haingana izy ireo, ny marina dia ny rafitra fitetezana azy, ny rindrambaiko ary ny vidiny mifaninana no nahatonga azy ireo ho iray amin'ireo safidy tsara indrindra ho an'ireo mitady mpanadio banga robot. Raha liana amin'ny fividianana iray ianao dia aza misalasala mijery ny modely amin'ity orinasa ity.
Ahoana ny fisafidianana mpanadio banga
Rehefa mividy mpanadio banga ianao dia tsy maintsy mandray an-tsipiriany maromaro. Satria amin'izany fomba izany isika dia afaka mandray fanapahan-kevitra amin'ny mazava kokoa tsy misy tahotra ny hividy modely diso. Saingy, zava-dehibe ny mandinika azy rehetra sy mieritreritra amin'ny fotoana rehetra izay tena tadiavintsika. Izany rehetra izany dia hanamora ny fikarohana ataontsika. Koa satria zava-dehibe ny mieritreritra ny mpanadio banga ho fampiasam-bola ho an'ny tranonao, tsy te hividy vokatra izay tsy mahafeno ny filanao ianao.
Ny antsipiriany iray hafa izay tena zava-dehibe amin'ny fisafidianana ny mpanadio banga dia ny hery. Isaky ny mamaky ny mombamomba ny mpanadio banga isika dia mahita fa ny hery dia aseho. Na dia zava-dehibe aza ny fakana hevitra azy dia tsy maintsy raisinay ho famantarana io isa io. Tsy zavatra milaza amintsika foana raha matanjaka kokoa ny modely iray.
Misy modely izay amin'ny taratasy dia manana hery kely kokoa ary raha ny marina dia maniry tsara kokoa izy ireo. Noho izany antony izany dia tsara ny mandinika ny isa izay matetika lazainy momba ny fahefana, fa tsy maintsy raisina ho famantarana ny tena heriny.
Ny mahaliana anay dia ny mpanadio banga dia mahery. Satria amin'izany fomba izany dia ho vitantsika ny mamita ny loto sy ny vovoka miangona ao an-trano haingana sy mora kokoa. Saingy, tsy mila mpanadio banga mahery loatra isika. Satria izany no mahatonga azy hifikitra amin'ny karazana surface rehetra. Ny tsara indrindra, ny mpanadio banga dia manana regulator herinaratra. Amin'izany fomba izany no ahafahantsika mamaritra ny hery tiantsika hampiasaina arakaraka ny zava-misy.
Amin'ny ankapobeny, ny mpanadio banga misy tady (ireo mifandray amin'ny mains) dia mahery kokoa noho ny an'ny bateria. Noho izany dia tsipiriany tokony hodinihina. Tsy midika akory izany fa tsara kokoa izy ireo, satria ny mpanadio banga mandeha amin'ny bateria dia mitsentsitra tsara. Saingy zava-dehibe ny fahafantarantsika izany sy ny fiheverantsika an'io antsipiriany io.
Misy pitsopitsony hafa afaka manampy antsika betsaka rehefa misafidy mpanadio banga iray mihoatra ny iray hafa. Ireo dia lafin-javatra izay mety tsy mitovy lanja amin'ny hery na marika, fa misy fiantraikany amin'ny fizotran'ny fanapahan-kevitra ihany koa. Noho izany, zava-dehibe ny fitadidiantsika azy ireny.
Zava-dehibe ny fahaiza-maneuverability sy ny fanamorana ny fampiasana. Tianay ny hivezivezy ao an-trano am-pilaminana amin'ny fotoana rehetra. Tsy voatery hisintona ny mpanadio banga na hoe mavesatra loatra. Ary koa mba tsy hikorontana rehefa mampiasa azy. Noho izany dia tsy maintsy jerena ireo karazana zavatra ireo. Indrindra fa tsy mavesatra loatra aminao izany, satria raha tsy izany dia ho sarotra kokoa noho ny efa misy ny asa fanadiovana ny trano.
Ny fikojakojana sy ny fanadiovana ny vacuum cleaner koa dia tsipiriany hafa tokony hodinihina. Satria mila zavatra tsy mitaky fotoana be loatra isika. Raha manana petra-bola isika, zavatra izay ananan'ny ankamaroan'ny modely, ny fanadiovana sy ny fikojakojana dia tsotra. Esory tsotra izao ny fitoeran-drano, esory ary sasao mba hanesorana ny loto sisa. Asa tsotra izay mila minitra vitsy monja. Ankoatra izay dia mitsitsy isika satria tsy mila mividy kitapo.
Modely maro no manana jiro sy famantarana bateria. Ireo dia antsipiriany fanampiny izay afaka manampy antsika hahomby kokoa ny fampiasana ny mpanadio banga. Tsy isalasalana fa lafy tsara sy mahasoa izy ireo. Na dia tsy izy ireo na tsy tokony ho tapa-kevitra. Farafaharatsiny tsy raha midika izany fa ambony ny vidin'ny mpanadio banga.
Tsipiriany manan-danja iray hafa amin'ny zava-nitranga fa ianao mividy tady vacuum mpanadio dia ny mandinika ny halavan'ny tady. Satria mety ho fohy dia fohy izany ary mametra anao betsaka amin'ny fotoana anaovanao ny fanadiovana. Satria isaky ny manova efitrano ianao dia tsy maintsy manala ny plug indray. Noho izany ny tariby lava dia safidy tsara kokoa amin'ny fampiharana.
Misy sivana ny mpanadio banga ankehitriny. Ny karazana sivana dia zavatra tsy voamariky ny maro, fa tena zava-dehibe. Satria mety hitarika fitehirizana lehibe amin'ny vola sy fikojakojana izany. Noho izany dia zava-dehibe ny manamarina ny karazana sivana izay ananan'ny mpanadio banga tadiavintsika.
Ny mahazatra indrindra ankehitriny dia manana sivana HEPA izy. Karazana sivana izay mitroka loto be. Nefa koa, afaka manadio azy mora foana isika mba hahafahanao mampiasa azy mandritra ny fotoana maharitra. Ankoatra izany, ny fomba fanadiovana ity karazana sivana ity dia tena tsotra. Mila mandona azy fotsiny isika, avela ho maina ary avereno ao amin'ny vacuum cleaner. Dingana tsotra.
Manana sivana jiro manga ihany koa izahay, hita amin'ny karazana mpanadio banga sasany toy ny rano. Afaka diovina ihany koa izy ireo ary manana fahaiza-manao avo lenta. Ankoatra ny fanampiana amin’ny fanadiovana ny rivotra. Saingy voafetra amin'ny karazana mpanadio banga manokana izy ireo.
Ny mpanadio banga hafa dia manana sivana tsy voamarina HEPA. Tsy azo diovina io karazana sivana io, ka voatery manova azy ireny indraindray. Zavatra tsy mahazo aina ho an'ny mpampiasa. Ankoatra izay dia fandaniam-bola tsy ilaina amin’ny tranga maro.
Noho izany, ilaina ny mandinika ny karazana sivana izay ananan'ny mpanadio banga. Satria ny sivana izay azontsika diovina no mety indrindra ho antsika.
Raha ny lojika, ny vidiny dia antsipiriany manan-danja lehibe amin'ny mpampiasa. Koa satria miankina amin'ny teti-bolantsika dia manana fetra sasantsasany isika ary mety misy modely tsy takatry ny saintsika. Noho izany, zava-dehibe ny fahafantarantsika hoe modely inona no azontsika atao, indrindra amin'ny karazana mpanadio banga sasany.
Raha toa ianao ka mitady robot mpanadio banga, ny vidiny dia matetika ambony noho ny mahazatra modely. Na izany aza, amin'ny tranga maro dia mihoatra ny 400 euros. Na dia misy marika manana modely avy amin'ny 200 euros mahery aza. Noho izany dia fampiasam-bola maharitra izany, satria maharitra ela izy ireo. Saingy, zava-dehibe ny mieritreritra izany.
Misy mpanadio banga mahazatra amin'ny vidiny rehetra. Afaka mahita mpanadio banga isika manomboka amin'ny 80-90 euros izay manome antsika kalitao tsara. Na dia ny mahazatra indrindra aza dia ny vidiny mihoatra ny 100 euros, eo anelanelan'ny 100 ka hatramin'ny 200 euros dia hitantsika ny ankamaroan'ny modely eny an-tsena. Laharana misy karazany maro nefa afaka mihetsika mora kokoa.
Tsy misy maharesy lahatra anao?
Raha tsy nahita mpanadio banga mifanaraka amin'izay tadiavinao ianao, dia azo antoka fa hahita izany ianao amin'ireto vokatra ireto:
Fantaro ireo mpanadio banga rehetra misy 🙂
Ho an'ny karazana manokana sasany, toy ny mpanadio banga indostrialy na mando, dia somary ambony kokoa ny vidiny. Na dia tsy misy fahasamihafana goavana aza. Saingy zava-dehibe ny hahafantaranao izay mitranga, mba hisorohana ny tsy ampoizina tsy mahafinaritra amin'ny ho avy. Ny ampahany tsara dia ny hoe mihamaro ny marika manomboka ny modely mora vidy. Mba ho mora kokoa amin'ny mpampiasa rehetra ny fidirana amin'izy ireo.
Na izany na tsy izany, raha ny zavatra tadiavinao dia ny mitahiry ny fividiananao ny mpanadio banga vaovao, dia misy hetsika mandritra ny taona izay ahafahantsika mahita tolotra tena mamy. Ny sasany amin'ireo andro ireo dia:
Black Friday amin'ny mpanadio banga
Cyber ​​​​Monday amin'ny mpanadio banga
Andro voalohany amin'ny mpanadio banga
Noho izany, mahita mpanadio banga mora vidy izahay eny an-tsena. Misy modely izay manomboka amin'ny 60 euros eo ho eo ny vidiny amin'ny tranga sasany. Saingy, ny ankamaroany dia matetika ao amin'ny fizarana eo anelanelan'ny 100 sy 200 euros. Ny tsara dia ny kalitaon'ny mpanadio banga amin'izao fotoana izao. Noho izany, na dia modely lafo ambany 100 euros aza dia hanome anao fampisehoana tsara.
Ahena ny vidiny
Vacuum Cleaners amin'ny andro voalohany
mpanadio vacuum black friday